Otu esi etinye ma melite Git kacha ọhụrụ na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye ma melite Git kacha ọhụrụ na Ubuntu 20.04
Tuesday, July 13, 2021 Tuesday, June 1, 2021 by Jọshụa James
Kedu ihe bụ Git?
Lelee ụdị Git
Wụnye PPA omenala: GIT-CORE/PPA
Mechaa Wụnye na Mmelite GIT
Taa, anyị ga-eleba anya ka esi etinye ma kwalite na ụdị Git kachasị ọhụrụ. Ubuntu 20.04 na-ebufe ya na Git na ebe nchekwa ha bụ isi; Otú ọ dị, na Ubuntu 20.04 bụ usoro LTS, a na-emepụta ngwugwu ngwanrọ maka ịdị jụụ na anaghị agụnyekarị mwepụta ọhụrụ nwere njirimara kwalitere nke nwere ike imebi nkwụsi ike. Ubuntu ga-ebuga naanị mmelite nchekwa maka ụdị Git nke LTS dị ugbu a.
Yabụ, okwu mgbe ụfọdụ na sistemu LTS bụ na ngwungwu ngwanrọ na-ada n'azụ n'ihi ahụhụ na-enweghị nchekwa na-eme. Ọ dabara nke ọma na Ubuntu, anyị nwere ike ịgbakwunye PPA omenala site n'aka ndị mmepe nke ngwanro a kwesịrị ntụkwasị obi yana ndị na-ahụ maka nchekwa na mbụ. N'ihi ya, n'ihe banyere Git, ohere nke sistemu gị nwere ike ghara ịdị mfe dị ntakịrị n'ịtụle uru nke imelite maka njirimara ọhụrụ, mmelite na nsogbu ndị na-enweghị nchekwa na ahụhụ.
GIT bụ maka ndị mmepe chọrọ sistemụ njikwa ụdị kwụ ọtọ mara mma. Ọtụtụ sọftụwia bụ mbọ imekọ ihe ọnụ na mgbe ụfọdụ nwere ike ịnwe ọtụtụ narị mmadụ na-arụ ọrụ na mmepe ngwanrọ. Ọ dị mkpa ịgbaso nkwa ndị a, nke a na-emekarị na alaka n'ọtụtụ ọrụ tupu ejikọta ya na nna ukwu maka ntọhapụ. Ọ dị mfe iji nyochaa na nyochaa mmejọ ọ bụla na-ezighi ezi ma laghachi azụ, na-eduga na mmepe dị mfe karị ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-ezighị ezi.
Nke mbụ, lelee ka ị hụ ụdị git ị na-agba ugbu a, ọ bụrụ na ọ dị, jiri iwu a.
Ọ bụrụ na etinyere GIT, ịgaghị ewepụ ya dị ka mgbe anyị wụnyechara PPA, ị nwere ike imelite ya ma ọ bụ wụnye ya ọhụrụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ya na sistemụ Ubuntu gị.
Na-esote, anyị ga-agbakwunye omenala PPA GIT Core nke ndị Ndị otu Ubuntu Git Mainters maka ụdị kwụsiri ike kachasị ọhụrụ.
Tinye paswọọdụ gị, mgbe ahụ ị ga-enweta ozi dịka foto dị n'okpuru ebe a, pịa tinye.
N'akụkụ ikpeazụ, mee iwu a:
Ọ bụrụ na ị wụnyere Git, ị ga-ahụ ngwugwu ọhụrụ abụọ iji kwalite.
Mee iwu a ka ịkwalite
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye Git ka ị tinyeghị ya, mee iwu a:
Ozugbo emechara, lelee ụdị ahụ ka ịhụ ụdị Git ọhụrụ gị.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, anyị si v2.25.1 gaa na v2.31.1. Ọzọkwa, a ga-ebudata mmelite ọhụrụ ọ bụla ma tinye ya na ebe nchekwa PPA ọhụrụ agbakwunyere.
Git bụ sọftụwia dị egwu maka ndị nrụpụta sọftụwia yana ọbụna ndị admins sys. Ndị nwe webụsaịtị nwere ike soro mgbanwe dị na akwụkwọ ndekọ aha ụfọdụ mgbe ị na-emepụta sava ma ọ bụ weebụsaịtị gị, yana ikike ịtụgharịghachi ngwa ngwa bụ ihe na-ekwesịghị ileba anya. Git abụghị ngwanrọ kachasị mfe iji rụọ ọrụ. Otú ọ dị, ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka ihe e mere ya.
Categories Ubuntu Tags GIT, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye Fail2ban na Ubuntu 20.04 na nhazi